USongqongqo uzopika uJaiva neMfezemnyama – Maskandi Media
USongqongqo uzopika uJaiva neMfezemnyama
USongqongqo ft Jaiva Zimnike x Imfezemnyama. Kulindeleke ukuthi kudilike umthangala kuzamazame umhlaba kufiphale ilanga licoshwe zinkukhu uma sekuphuma le album kaSongqongqo. Lo mculi uthi ukhethe ukupika lezi nsizwa
esezimkantsha ubomvu endimeni ngoba akezwani nokuphakela abathandi bomculo wakhe ukudla okungavuthiwe. Uyaziwa umculi onjengo Jaiva Zimnike ukuthi akabenzeli phansi abaculi.
Simbonile ecula nabaculi abafana nabo Shwi noMntekhala, Qhosha ngokwenza kwakhe, Mkhathazi nabaningi akaculile nabo samuzwa ukuthi ungena kahle kanjani.
USongqongqo uthi ufuna ukubonisa izwe lonke ukuthi akezelanga ukuzodlala la emculweni kodwa ufuna ukujabulisa abantu ngakho konke okusemandleni.
“Ngiqale ngabhekisisa ngaphambi kokuthi ngizicele lezi nsizwa ukuthi zizononga lo mculo wami ngoba ngiyazazi ukuthi ziyazimisela”. “Kuwo wonke ama album ezike zapikwa kuwona azikaze ziphoxe nakanye. Ngingabethembisa ngaphandle kokunanaza abantu ukuthi inkulu kakhulu ingoma equkethwe kule album”.
“Ngicela ukuthi bawemukele umculo wami bese bengixhasa ngama original ngoba lento yasemgwaqeni iyawuthunaza umculo”. Kubeka uSongqongqo.
Le combination ekuleli cwecwe lalensizwa iyabonakala ukuthi izimisele ngokwenza into enkulu. Leli cwecwe kulindeleke ukuthi liphume makuqala inyanga uJuly ngoba konke sekumi ngomumo.
Kucelwa abathi bomculo ukuthi benze lokho abadume ngakho ngoba abakaze badumaze nakanye. Usebenzileumfana ngokukhulu ukuzikhandla nokuzimisela ukuze umculo wakhe ubese zingeni elifanele ukulalelwa umthandi womculo akamthandayo nakamhloniphayo.
“Ngithokozile kakhulu uma ngizwa kuthiwa le nsizwa yangakithi isize yafinyelela ekuthenini ilikhiphe leli cwecwe. Okungichaza kakhulu ukuthi ubize izinsizwa ezinekhono hhayi nje lokucula kuphela kodwa nelokudlala intambo. Kubeka umnikazi wenkani, inkani uqobo lwayo eNkandla.
Previous Previous post: Uzokhipha ophekwe uJaiva Zimnike
Next Next post: Igalelekile Indlabeyiphika yangempela